1. Abantu abaningi bafuna imfihlo yesibalo esiphelele. Ngesihlalo sobukhosi sobusha Ngokuthola isimo esihle nokuthi ungalahla kanjani amafutha esiswini. Lokho ngaphezu kokubuyisa intsha Faka ubulili ngokugqoka izingubo eziphelele kuzo zonke izitayela. Futhi kulandelwa impilo enhle Ukuthi akekho ongasinika thina ngaphandle kwethu Namuhla sinezinyathelo ezilula, kepha kudinga ukubekezela nokuziphatha okuncane. Uma uyidlulisa, uzoqinisekiswa ukuthi isibalo sakho esihle sizobuya ngokuqinisekile.
2. Phuza ingilazi enkulu yamanzi ahlanzekile ngaphambi kokudla ngakunye. Le ndlela, ngaphezu kokwenza isikhumba sakho sihle Uhlelo Excretory Futhi kusisiza ukugcwalisa ngokushesha okungakholeki Ngoba amanzi ayingxenye ebalulekile yomzimba Iqabula emini Namanzi okuphuza imizuzu eyi-5 - 10 ngaphambi kokudla konke ukudla. Futhi kusenza siphuze ngokushesha okukhulu Ngoba amanzi ayengeniswa epanini ngenxa yokudla kuqala Kepha kufanele ngikwenze umkhuba njalo.Ngabe uyabona ukuthi ulahlekelwa kanjani ngamafutha esiswini? Akunzima
3. Khetha ukudla Iqondakala ngokuqondakalayo Lapho isisu siqala ukuza Kukhombisa ukuthi umsoco wethu ekukhetheni kokudla uye wanganakwa kakhulu, akunjalo? Kulungile, qala njalo phansi. Ngokukhetha ngokucophelela kokudla, okubalulekile ezindleleni zokulahleka kwamafutha esiswini Into yokuqala ukugwema iziphuzo ezibandayo. Uphudingi oshukela abaphezulu Yidla ukudla okunesitashi esincane. Noma shintshela kufulawa owusizo njengokusanhlamvu okuphelele Noma isinkwa, isinkwa sikakolweni ngokulinganisela esidlweni ngasinye Uma kuyilayisi, ke iladi elilodwa ekudleni ngakunye. Faka ukudla kwamaprotheni okubalulekile ukulungisa izindawo ezilimele. Nokudla okune-fiber eningi Ungakhohlwa ukuthi okudlayo kusebenza emzimbeni wakho. Kuhlala kuyicaphuni ethembekile. Masikhethe ukuthola okuthile okuwusizo emzimbeni kusuka namuhla kangcono.
4. Khetha umsebenzi wokuzivocavoca owuthandayo futhi uwenze njalo, futhi amakhulu abantu awakujabuleli ukuzivocavoca ngendlela efanayo. Ngakho-ke angifuni ukugxila kulokho Kufanele kube noma ikuphi ukuzivocavoca umzimba noma hlobo luni lokuzivocavoca, vele ucele ukuthi kube yilolo vivinyo esiluthandayo. Kwenze njalo, izinsuku ezingama-3-5 ngeviki, ngokuya ngokulula Kepha kufanele ngikwenze ngokulandelana isikhathi esingaphezu kwemizuzu engama-30 kuya ehoreni eli-1 kuya ngeminyaka nobungqabavu bomzimba Abanye abantu bathanda ukuhamba, ukugijima, i-yoga, ukudansa, ukuhamba ngebhayisikili, ukubhukuda, i-cardio, njll. Ngithi uma bekwenza njalo. Futhi kanye nezinye izindlela zokuziphatha Ukuthi ungawanciphisa kanjani amafutha esiswini Ngaphandle kokujaha Amafutha we-Belly azokwehla kancane kancane, alandelwe okunempilo Futhi ukukhanya kuyabonakala
5. Yiba nethemba Nciphisa ukucindezeleka Njalo khulisa amandla akho amahle ne-EQ. Lokhu kuyinto enzima kakhulu ukuyenza. Ekuzameni ukulawula imicabango, imizwa, noma izingcindezi Inqobo nje uma singabantu futhi sisaphila Kepha zama ukuqonda izinto Emhlabeni ukuthi akukho okuqinisekile Injabulo yayinathi kungekudala. Ukuhlupheka kuyangena futhi kuzodlula maduze. Yonke inkinga inesixazululo, vele wazi. Futhi ngesikhathi sokuphumula Zinike amandla amahle Shiya umthwalo okwesikhashana bese unaka ukunakekela umzimba wakho kuqala. Ungavumeli ukucindezeleka kusilimaze. Ukucindezela ngokwengeziwe lapho udla kakhulu Lapho ucindezelekile ngokwengeziwe, kulapho kukhungatheka khona ngokwengeziwe Okubaluleke kakhulu, ingcindezi ingukuthi Isitha ngempilo yethu ngazo zonke izindlela
6. Kulula, akunzima nakancane, empeleni, kukuzinakekela. Ngokuza uzithande futhi uzinikeze izinto ezinhle futhi Kepha kudinga ukwenziwa njalo Ngoba impilo enhle ayithengiswa Uma ufuna, kufanele uzenzele wena.